06/02/2018 - Page 2 sur 5 -
RN7 : Sokatra miisa 245 nentina tao anaty vatam-paty
Raha baoritra sy gony afangaro entana, na lamba no hitondrana sy hanafenana ireo sokatra haondrana an-tsokosoko sy tra-tehaka any amin’ny lalam-pirenena hatramin’izay, dia tranga hafa mihitsy indray no niseho tany amin’iny lalam-pirenena fahafito iny ny …Tohiny
Ankorondrano : Narodana fa tsy manara-dalàna ny fotodrafitrasan-dRavalomanana
Mazava ny an’ny Fanjakana. Rehefa hita fa tsy manara-dalàna ny fanorenana eto amin’ny firenena, indrindra eto an-drenivohitra, avy hatrany dia miroso amin’ny fandrodanana izany fotodrafitrasa izany ny eo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny …Tohiny
Feno 9 taona ny raharaha 7 Febroary : Mbola afa-maina foana Ravalomanana Marc
Feno sivy taona rahampitso ny raharaha 7 Febroary 2009, izay nisiana vonoan’olona faobe tetsy Ambohitsorohitra. Ny mpomba an’ingahy Andry Rajoelina moa no maty novonoin’ny mpitandro filaminana nomen’ingahy Ravalomanana Marc baiko tamin’izany. Fahefana no nalain-dRajoelina tamin’izany, …Tohiny
Toetr’andro : Haharitra 3 andro ny rotsak’orana eto an-drenivohitra
Araka ny vaovao avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, dia haharitra telo andro nanomboka omaly 5 febroary ny rotsak’orana eto Antananarivo, izay arahina oram-baratra, indrindra rehefa folakandro sy hariva. Manodidina ny 17° ny maripana ambany …Tohiny
Marc Ravalomanana : Mamaky ady amin’ny Fitsarana